အမ်ဇက်ပွဲမှပုံများ - MYSTERY ZILLION
September 2009 edited November 2009 in Member ဆိုင်ရာ
26 ရက်နေ့က ပုံတွေပါ..
ဝဲမှယာ < ကိုစိုင်းကျော်စွာဝေ, ကိုဇူးဇူးအောင်, ကိုkilo, ညမီးအိမ်၏..., ညမီးအိမ်>
ဝဲမှယာ < ကိုအလက်ဇန္ဒား, မိန်းကလေး၂ယောက်မသိပါ ကိုစိုင်းကိုပြောပါမည်, ကိုစိုင်းကျော်စွာဝေ, ကိုဇူးဇူးအောင်, ကိုkilo>
ဝဲမှယာ < မယမမင်း, မမိုးသက်ထား(မော်မော်သစ်လေးရဲ့ချစ်ချစ်), မော်မော်အဲလက်ဇန္ဒား, လက်တစ်ဖက်ပေါ်နေတာကိုယောင်စိန် >
ဝဲမှယာ < Nightdefender, Western, မဟိုလိုလိုဒီလိုလို, မဖြူပန်းခက်, ကို exiter >
ဝဲမှယာ < ကိုစိုင်းကျော်စွာဝေ, ကိုဇူးဇူးအောင်, ကိုအလက်ဇန္ဒား, ကို kilo >
ကျောကြီးပေးထားတာကတော့ ဂျစ်ပစီလေးဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်နေတာကတော့ ဟိုလိုလိုနဲ့မဖြူပန်းခက်ပါ။ မိုးတိုးမတ်တပ်လေးကတော့ NightDefender ပါ။
MZ လှပျိုဖြူ ၃ယောက်ကတော့ ဘယ်ဘက်ကနေစပြောရရင် မဟိုလိုလို, မဖြူပန်းခက်, chocolate ပါတဲ့။
ဝဲမှယာ < ညမီးအိမ်, မမှတ်မိတော့ပါ, စည်သူ, အနောက်ကမပေါ့်တပေါ်လေးက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်လေး starlay, စည်သူ့သူငယ်ချင်း, ဂျစ်ပစီ>
size ကို 640 X 480 အထိ ချုံ့လိုက်ပါလား။ နောက်မို့ဆို ကြည့်ရတာ အရမ်းနှေးတယ်။ ဒါမှမဟုတ် album မှာပဲ တင်ပြီး link ပဲပေးစေချင်တယ်။ နောက်ပြီး ပုံတွေက ထပ်နေတယ်နောှ။
Caption Index လေးထည့်ပေးရင် ပိုကောင်းမလားလို့...။ ဘယ်ပုံက ဘယ်သူတွေပေါ့...။
Rar file လေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်လုပ်လိုက်ပါလားခင်ဗျာ ။ အခုလိုမြင်ရတာတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြာနေလားလို့ပါ ။ (အဆင်ပြေတယ်ဆိုလဲဒီအတိုင်းလေးလဲကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ )
ကြည့်မယ်ဆို ဆွဲပေါ့ဟုတ်ဘူးလား ....:):):)
Caption လေးတွေတပ်ပေးပါလား အစ်ကို
Caption ထည့်ပေးဖို့ရာ ကျွန်တော် အခုထိ နစ်ခ်နဲ့လူ သိပ်မတွဲမိသေးလို့ပါ.. ကိုစိုင်းကျော်စွာ ကောင်မလေးေ၀ တို့.. တိုယောင်တို့ မော်မော် စန္ဒရားတို့မှ ဆက်လက်တင်ပေးပါလိမ့်မယ်.. Caption ကိုတော့ ကိုစိုင်းတပ်ပေးမယ်လို့ ယုံကြည်ရပါတယ်.. မလိုက်ပြီ :P သူက ကင်မရာ နှစ်လုံးနဲ့တောင် ရိုက်တာဆိုတော့ သူ့ကိုသာ စောင့်ပေတော့ဗျို့.. အနော်က ဖုန်းကင်မရာ အစုတ်လေးနဲ့ရိုက်ရလို့ မန်ဘာကတ်က နာမည်တွေ မမြင်ရလို့ပါ..
caption ထည့်ပေးဖို့ရာ ကျွန်တော် အခုထိ နစ်ခ်နဲ့လူ သိပ်မတွဲမိသေးလို့ပါ.. ကိုစိုင်းကျော်စွာ ကောင်မလေးေ၀ တို့.. တိုယောင်တို့ မော်မော် စန္ဒရားတို့မှ ဆက်လက်တင်ပေးပါလိမ့်မယ်.. Caption ကိုတော့ ကိုစိုင်းတပ်ပေးမယ်လို့ ယုံကြည်ရပါတယ်.. မလိုက်ပြီ သူက ကင်မရာ နှစ်လုံးနဲ့တောင် ရိုက်တာဆိုတော့ သူ့ကိုသာ စောင့်ပေတော့ဗျို့.. အနော်က ဖုန်းကင်မရာ အစုတ်လေးနဲ့ရိုက်ရလို့ မန်ဘာကတ်က နာမည်တွေ မမြင်ရလို့ပါ..
ကိုစိုင်းရေ စောင့်နေပြီနော် မြန်မြန်လေး မြန်မြန်လေး :67::67::67:
နာမည်နဲ့ လူနဲ့ မတွဲမိဘူး ကိုကို၀င်းရေ
အောက်က လေဘယ်လေးနဲ့ နာမည်ပါ ရေးပေးရင်ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်နော်
တော်ကြာ ကြည့်တော့ကြည့်ရပါတယ် ဘူတူတွေမှန်းမတိရင် မကောင်းဘူးလေ
A-Cho wrote: »
ထောက်ခံပါတယ်။ ပိုးစိုးပက်စက်ကို ထောက်ခံပါတယ်။ နောက်ပြီးအဲဒီကဒ်လေးတွေက ဘာလဲဟင်။ member card လား။ တစ်ခုလောက်လိုချင်လို့ ဘယ်မှာလာထုတ်ရမလဲဟင်။ ပြောကြပါဦး:77::77::77:
ဟဲ့... ပလုပ်တုတ်နဲ့ ရသာနဲ့ကစား...
လန့်ထှာ...လန့်ထှာ... လန့်ထှာ... အမလေး
မည်းမည်း မည်းမည်းနဲ့ မျက်နှာကြီးပေါ်လာလို့ လန့်ထှာ...
သုံးမိနစ်တစ်ခါပြတ် ကွန်နက်ရှင်နဲ့ဆိုတော့ တော်တော်နဲ့ပေါ်မလာဘူး
ခုနကလို လန့်စရာကြီးပေါ်နေပြီး ရပ်နေရော...
တော်ပါသေးရဲ့ ငဇူးက သူရဲ မဟုတ်ပေလို့...
တေတေချာချာမကြည် ့ဖူး...ဟင် ့..ညိုချောတွေ ့ဖူးလားလို့:2:
ကြည့်မိရင်ပြောမိမယ်.. ပြောမိရင် အပြစ်ဖြစ်တော့မယ်.
ဒီတော့ မလာကြည့်တော့တာပဲ ကောင်းပါတယ်.. :14::14::14::13::13:
ငါက ပုံတွေ ကြည် ့ပြီးတွားရင် ..အဲဒီကြီး..သွားသွားဖတ်မိတယ်.. ညီ၀င်းရယ်။
နင်ဟာလေး...ခဏပြောင်းပေးပါအုံး...ရင်ထဲ အောင် ့အောင် ့တွားတာပဲ ..အဟင် ့။
ကိုကိုဝင်း တစ်ယောက်ပုံကို မမြင်မိပါလား။
ပလုပ်တုတ်တုတ် ဖိုးဝရုပ် ...... အမငှီးးးးးး ....အနော်ပါဘူးလေ...:d:d:d
ဟိုက် ငါ့ပုံက တစ်၀က်တောင်မပြည့်ပါလား :d
ကဲ ပုံတွေ အကုန် သမ သွားဘီဗျာ..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မှတ်ချက်.။ ။ ဇူးဇူး ပုံ မပါ ပါ။ ကွန်နက်ရှင် က ၄င်းပုံအား ဖော်ပြခွင့်မပေး၍ ဖြစ်သည်။
ညမီးအိမ်ကတော့ ကြွားတယ်ဟေ့ ... ကိုကီလိုကြီးက ပိုဝလာတယ်ဗျာ ... မင်းသမီးလေး စည်သူကတော့ မဲပြီး ပိန်သွားသဗျာ ... အလက်ဇန်းဒါးကတော့ အရင်တွေ့ဖူးတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေမှာ အသက်ကြီးပြီလို့ ထင်ရပေမယ့် ငယ်ငယ်လေးပါလား ... မင်းသား၊ မင်းသမီးတွေပဲဗျို့ အားလုံးက ...
စိုးသီဟနောင် wrote: »
Alexander က အသက်သုံးဆယ်ပြည့်တော့မှာဗျ။ ငယ်တော့ဘူး။
သူ့ဘာသူ နုနေတာကတော့ ဘုရာသခင်အလိုတော်အတိုင်းပေါ့နော် ..... ):D:))
ဒါဆို ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့သူ တော်လို့ပဲ ဖြစ်ရမယ် .... :d
ဒါကတော့အလွန်တရာလိုက်ဖက်တဲ့ ညမီးအိမ်တို့အတွဲပါ။ :d
နာလို၀ူးနော်.....နောက်တစ်ခါပွဲကြရင် နာလည်း ကြွားပြမယ် :d
ကိုပရင့်က ဘရ် ညာတစ်ယောက်စီ တွဲပလိုက် သာသွားအောင် ဟီး...:d:d
တို့Star Lay တို ့ကတော့လုပ်လိုက်ရင်မပေ့ါတပေါ်ပဲနော် :D:D လူတော်တော်များများလာကြသားပဲ ၀မ်းသာပါတယ် ကျွန်တော်မလာဖြစ်ခဲ့တာတော့စိတ်မကောင်းဘူးဗျာ
အခုလို အမ််ဇက်ပွဲလေးကို တင်ပေးတဲ ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အဖွဲ ့သားများအားလုံးကို....:103:
အေ၀းရောက်နေလို ့မလာနိုင်ပေမယ့်တက်ရောက်ခဲ ့တဲ့ဖရန် ့တွေလိုပဲ ထပ်တူထပ်မျှပျော်ရွှင်မိပါတယ်....:):)
ဓာတ်ပုံတွေတင်ပေးတဲ ့ကိုကိုကို၀င်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်...:5: နာမယ်တွေနဲ ့နစ်နိမ်းတွေကို ရင်းရင်းနှီးနှီးနဲ ့သိဗေမယ့်ခုလိုဓာတ်ပုံမှာမြင်လိုက်ရတော့ဘယ်သူကဘယ်သူဆိုတာ တွေ ့ဖူးသွားတာပေါ ့..:)
အမ်ဇက်မှဖရန် ့များအားလုံးကို ခင်မင်လျှက်
ကြွားတာမဟုတ်ဘူးအစ်ကိုရေ့ ကောင်မလေးတွေပါလာမှာစိုးလို့ စိတ်မချလို့တဲ့ဗျ :d
၂၇ရက်နေ့ပွဲက ကိုပုရစ်ပြောတာကြားလိုက်ပါတယ်။ ဘာတဲ့ ခရီးတွေထွက်ရလွန်းလို့ ဘာတွေလုပ်တယ်ဆိုလားပဲ ဟဲဟဲ ဖွလိုက်ပြီ သိချင်သူများ သူ့ကိုမေးကြပါကုန်။
အဲဒီမှာ စတွေ့တာပဲဗျို့ ....
မပေါ့တပေါ်လေးတဲ့ ( လုံလုံခြုံခြုံပါပဲဗျာ. ကိုကို၀င်းတို့ကတော့လုပ်ချလိုက်ပြန်ပီ :d
သူကဖိုတိုဂရပ်ဖာဆိုတော့မပါ၀ူးဖစ်သွားတယ် . :d ကိုကို၀င်းရေ ။ မပေါ့တစ်ပေါ်လေးတစ်ပုံလောက်ဖြစ်ဖြစ်တင်လိုက်ပါဗျာ. နော့
ခရီးတွေ သွားရလွန်းလို့ အေ၀းပြေးကားတွေနဲ့ တော်တော်လေး ရင်းနှီးနေဘီ၊ လက်မှတ်တွေ အခက်အခဲရှိရင်ပြော ကူညီမယ်လို့ပြောခဲ့တာပါ...တစ်ညိုး ထင်ကြနဲ့နော် :d
အဲဒီစာက ကိုကိုဝင်းရေးထားတာဟုတ်ဖူးဗျ။ နာမည်နဲ့လူကိုက်အောင်ရေးပေးပါဆိုလို့ ကျွန်တော်ထပ်ဖြည့်ထားတာပါ။ အဲဒီ မပေါ့်တပေါ်လေးဆိုတာ အနော့်လက်ချက်ပါ။ ဟဲဟဲ...
အဲဒါပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော် နာသိတယ် ဖုန်းဆက်လိုက်ရမလား...(ထူးအယ်လင်းလေသံနဲ့ဖတ်ရန်)
ကိုကို၀င်း တို့ကတော့လုပ်ပြီ......နဂိုကတည်းက မလှတည့် ပုံကို ပိုဆိုးအောင်လုပ်လိုက်တယ်....:2:
ကိုရသာ(ယေးဖလောက်) ကျနော်ကို လူလည်လုပ်သွားပါတယ်....လာမယ်ဆိုပြီး နယ်ရောက်နေပါတယ်....မကျေနပ်ပါ...:14: